BGSH | Shiga ngu ai gaw n htum n wai ai hpaji rai nga ai
Posted on August 3, 2016	by Local Reporter
Posted in News (Shiga)	| Leaveacomment
Posted on May 25, 2016	by Local Reporter
Armed clashes several times between Kachin Independence Army and Burma Army in northern Shan State and southern Kachin State since 23-25 May.
Burma Army’s LID 99 and KIA’s 6th brigade clashes near China border andaKachin village, called Man Ping village, has been burned down by Burma Army. Alternatively ocurring ambushed, armed clash, reinforced in three days.
Likewise, Burma Army LIB 237 and KIA’s 27th battalion have engaged near Mansi township, KIA’s 3rd Brigade controlled area sinceaweek ago.
Burma Army has launched heavy offensive tactic against non-NCA (Nationwide Ceasefire Agreement) signatories armed groups since 2015 November.
Posted on May 24, 2016	by Local Reporter
သူပုန် (Rebel) ဆုိုတာ နုိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက် တခုခုအတွက် အာဏာရ အစုိုးရ ကုို တော်လှန် ပုန်ကန်တဲ့ လက်နက်ကုိုင် အဖွဲ့ အစည်းကုို ခေါ်တာပါ။
တုိုင်းရင်းသား လက်နက်ကုိုင် တော်လှန်ရေး တပ်များ ကုို သူပုန် လုို့ သမုတ်ရင် တုိုင်းရင်းသား တော်တော်များများ ကုိုယ့်အမျိုးထိတော့ မခံမရပ်နုိုင် ဖြစ်ကြတာ တွေ့ ရပါတယ်။ ကျနော် က အစ ပေါ့။
တကယ်တော့… ဗမာစကားအရ သူပုန် ဆုိုလဲ မှန်တာ ပါပဲ။
ဒါပေမယ့်… အခု မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတာက ပြောင်းပြန်… သူပုန် ဆုိုသူတွေ တုိုက်နေတာ NLD အစုိုးရ ကုို မဟုတ်ဘူးဗျ။
Decentralization is an administrative system, Federalism isapolitical concept.
Decentralization ဆုိုတဲ့ ဗဟုိုချုပ်ကုိုင်မှု စနစ် လျှော့ချခြင်း ဆုိုတဲ့ ဝေါဟာရ ကုို မြန်မာ့နုိုင်ငံရေး လောကမှာ အခုတလော ပုိုမုို ကြားလာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Federalism ဆုိုတာကတော့ အရင်ကတည်းက ကြားဖူးနေကျပါ။
Decentralization မှာ လုပ်ပုိုင်ခွင့် ခွဲဝေခြင်းသာဖြစ်ပြီး၊ အာဏာခွဲဝေခြင်း မဟုတ်ပါ။
(တစ်ဦး တစ်ယောက်ပုိုင် ကုမ္ဗဏီမှာ သူဌေး တစ်ယောက်က ကုိုယ်စားလှယ်များကုို လုပ်ပုိုင်ခွင့် ပေးထားသလုိုမျိုး)
Federalism မှာ အာဏာခွဲဝေ ခြင်းဟာ အဓိက ဖြစ်သည်။
(သူဌေး တွေ အားလုံး စုပေါင်း အလုပ်လုပ်နဲ့ စုပေါင်း ကုမ္ဗဏီပုံစံ)
Posted on December 26, 2012	by Local Reporter
Hkristmas ngu ai gaw Hkristu shangai wa ai nhtoi hpe tsun ai lam anhte yawng chye ga ai.
Raitim, Hkristualam hpe chye ai ni gaw nau n law nga ai.
Teng sha myit yu ai shaloi, Madu Yesu shangai wa ai lam gaw, n hkru ai Mungkan hpe ninghtoi jahtoi ya na matu rai nga ai. Lachyum gaw Reform galaw kau na matu rai nga ai. Reform ngu ai gaw Rawt Malan bungli langai mung rai nga ai.
Rawt Malan ngu ai shaloi, anhte law malawng chye na ai gaw Gasat Hkat ai (Fighting) hku sha chye na ga ai. Raitim, gasat hkat ai ngu aialachyum hpe sung sung myit yu ai shaloi n bung ai hpan law law nga ai hpe mu lu nga ai. Gasat ai ngu ai hta Idea hte seng nna gasat ai lam, ningmu gasat ai lam, makam htunghking hte seng nna gasat ai lam niamajaw, n-gup aga hte dangrang hkat ai kaw nna sinat hte gasat hkat ai du hkra Mungkan labau hta law law nga yu sai. Continue reading →
Posted in News (Shiga)	| 1 Comment
Hkum Hkrit Myit
Posted on November 30, 2012	by Local Reporter
(Sweet December Mungga)
“Dai majaw lamu kasa gaw, Hkum hkrit myit; yu mu, masha nlangamatu nachying kabu gara mai ai shi ga, ngai nanhte kaw gun sa ring ngai;” (Luka 2:10)
Chyoipra ai Chyum laika hta Kabu Gara Shiga laika (Mahte, Marku, Luka, Yawhan) hta ‘hkum hkrit myit’ nga ai ga si 18 lang rawng nga ai. Continue reading →
တော်လှန်ရေး ဆိုတာ အမြင်ပွင့်ခြင်းပါ။
Posted on November 14, 2012	by Local Reporter
ဒီနေ့ကျနော်တို့ အသက်ရှင်နေတဲ့ လူ့ကမ္ဘာဟာ တော်လှန်ရေးအဆင့်ဆင့် နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းတွေ နဲ့ ခေတ်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာပြီး၊ အခုလို အိုင်တီ ခေတ်ကို ရောက်လာတာပါ။
ကမ္ဘာ့တော်လှန်ရေး သမိုင်းများကို လေ့လာလိုက်တဲ့ အခါမှာ တော်လှန်ရေးပုံစံ အမျိုးမျိုး ရှိခဲ့ပါတယ်။ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ တော်လှန်ရေးသမိုင်းများထဲမှ အထင်ကရ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စဉ် အနည်းငယ်ကို ဖေါ်ပြရမယ် ဆိုရင်…. ဘီစီ ခေတ်က စရမှာပါ။ Continue reading →
လွှတ်တော်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ တရားရုံး ထိပ်တိုက် ပြသနာ အပေါ် သုံးသပ်ချက်
Posted on August 21, 2012	by Local Reporter
(၁) ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့ က ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်သည့် ကော်မတီ နှင့် ကော်မရှင်များတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များဖြင့်သာ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းပါက ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေအရပင် ပြည်ထောင်စု အဆင့် သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်သူများပါ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီ နှင့် ကော်မရှင်များဖြစ်လျှင်မူ ယင်းတို့ကို ပြည်ထောင်စု အဆင့် မသတ်မှတ်နိုင်ဟု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ တရားရုံးက ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါက ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်ခံရမည်သာ ဖြစ်သည်။ Continue reading →
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ်မှာ Sanction မရှိတော့တဲ့ ကာလ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ?
Posted on August 17, 2012	by Local Reporter
နိုင်ငံရေး သုတေသီ များ သုတေသန လုပ်ထားသော စာတမ်းများအရ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး နှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေး၏ အထိရောက်ဆုံး နိုင်ငံရေး လမ်းစဉ်မှာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ် လျှော့ချရေး (Decentralization) ပင်ဖြစ်သည်။ ဆိုတာပါပဲ။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ် ဆိုသည်မှာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေလို အထက်မှ အောက်ကို အာဏာပိုင်အဆင့်ဆင့် ခန့်ထားနိုင်သော စနစ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ဆိုရသော်၊ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်များ နှင့် ၀န်ကြီးများကို သမ္မတက တိုက်ရိုက် သူ့စိတ်ကြိုက်လူ ကို ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ပြုထားခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ် ကို လျှော့ချသော နည်း စနစ် သာဓကမှာ အောက်ခြေ (မြို့နယ်မှူးအဆင့်) မှ အစ ဒေသခံ ပြည်သူများ တိုက်ရိုက် ရွေးချယ်ခန့်ထားပြီး အထက်ကို အဆင့်ဆင့် ရွေးချယ် တင်မြောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီထက်ပိုအဆင့်မြင့်တာကတော့ ဖယ်ဒရယ်မူဖြစ်သည်။ ပြည်နယ် နှင့် တိုင်းအလိုက် ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဖြစ်သည်။ Continue reading →
လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားနှင့်လက်ထပ်သည့်ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက် တ၇ား ဥပဒေက ပေးအပ်ထားသော အခွင့်အရေးများ
Posted on August 13, 2012	by Local Reporter
(Anhte Jinghpaw La ni Buddha Num la yang sadi ra ai Upadi langai re. Majoi mi pyaw daw kadaw nna gan la ai ngu yang nta na sutgan yawng lawm mat ai baw rai nga ai. Bai nna, tara upadi hta anhte kaga Buddha makam n re ai Num niamatu mung maren shalawm ya na matu Lutdaw lung taw ai amat ni hpe tsun shangun ra ai.)
မြန်မာတို့သည် ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းဖြင့် အုပ်ချုပ်လာခဲ့သည်။ တရားစီရင် ရာတွင်လည်း ရာဇသတ်၊ ဓမ္မသတ်၊ ဖြတ်ထုံးတို့ဖြင့် မှုခင်းများကို စစ်ဆေးလာခဲ့သည်။ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ လက်အောက်သို့ကျရောက်ခဲ့သည့်အချိန်တွင်မူကိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့သွတ်သွင်းလာသည့် ပြဌာန်းဥပဒေများဖြင့် အမှုများ စီရင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ အမွေခံ အက်ဥပဒေ တို့မှာ ၄င်းတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှတဆင့် ယူဆောင်လာသည့်ဥပဒေများဖြစ်သည်။ သို့သော် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အမွေဆက်ခံရေး၊ လင်မယားကွာရှင်းရေးတို့တွင်မူ ရှေးဓမ္မသတ်များဖြင့်သာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အချို့သောအမှုများတွင်သာ ဓမ္မသတ်မသဲကွဲသည်များကို ထိုခေတ်က အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်သည့် ပရီဗွီကောင်စီက ဆုံးဖြတ်၍ လမ်းညွှန်သဖွယ် ပြဌာန်းပေးခဲ့သည်။ Continue reading →